Wasaaradda Cadaaladda Puntland oo soo Agaasintay kulan looga arin sanayay Tayaynta Hay’adaha Garsoorka Puntland. – Wasaaradda cadaaladda Puntland
Waxaa maanta hoolka Wasaaradda Cadaaladda Puntland ka dhacay kulan lagu soo bandhigayay baahiyaha ka taagan bahda Cadaaladda Puntland, kulanka ayaa waxa uu ahaa mid lagu soo bandhigay qiimeyn ay sameeyeen khubaro kasocday hay’adda UNDP.
Kulanka ayaa waxaa goob jog ka ahaa madaxda Wasaaradda Cadaaladda Puntland gaar ahaan Wasiir ku xigeenka Dr.Maxamed Cali Faarax iyo siihaya Agaasimaha guud mudane Ismaaciil Xaaji Cabdi.
waxaa sidoo kale kulanka goob joog ka ahaa Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Puntland , hay’adaha ka shaqeeya gargaarka sharciga , ururka Qareennada Puntlad, Ururka Qareenada haweenka Puntland iyo wufuud kale oo ka socotay Hay’adaha ay bahwadaagta yihiin Wasaaradda Cadaaladda Puntland .
Ugu horrayn waxaa kulanka lagu soo bandhigay xog dhamaystiran oo ku saabsan baahiyaha iyo caqabadaha haysta hay’adaha Garsoorka xiriirka la-leh sida xeer ilaalinta Maxkmadaha iyo Qareenada.
kadib dhagaysiga xogtaas waxaa laga dooday sidii xal loogu heli lahaa caqabadahaas iyo qaabka ugu habboon ee wax looga qaban karo baahiyaha taagan.
Ugu dambayntii waxaa la isla gartay in tababarro loo qabto dhammaan shaqaalaha garsoorka, xeer ilalainta iyo qareenadaba.
Waxaa kulanka soo xiray wasiir ku xigeenka, waxa uuna khubaradii soo diyaarisay warbixintaas uga mahad celiyay dadaalka ay bixiyeen waxa uuna ballan qaaday ka Wasaarad ahaan in ay dadaal ku bixin doonaan sidii wax looga qaban lahaa dhammaan caqabadaha hasyta bahda garsoorka si bulshada ree Puntland ay u helaan garsoor taysan oo fuliya adeeg caddaaladeed oo ay raali ku yihiin.
Posted on 5th May 2019 20th May 2019 Author
Posted on 23rd May 2019 23rd May 2019 Author